Askar katirsan dowladda Oo Qoryoolay Lagu dilay.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen magaalada Qoryoolay ee gobolka Shabeellaha hoose waxay ku dileen malleeshiyaad katirsan ciidamada dowladda. Ugu yaraan 2 askari ayaa la dilay, mid kalana dhaawac ayaa soo gaaray. Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee fuliyay howlgalkan gaarka ah ayaa si nabad geliyo ah waxay ugu laabteen goobihii ay markii hore kasoo ...	Read More »
Sawirro: Horumar Laga Dareemayo Suuqyada Xoolaha Wilaayada Islaamiga Ah Ee Bay Iyo Bakool.
Horumar weyn ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha ee wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool, taasoo ay ugu wacan tahay nidaamka iyo kala dambeynta ay Xarakada Al-Shabaab ku hogaamineyso bulshada. In badan oo kamid ah degmooyinka iyo degaanada wilaayada oo aan safar shaqo ku tagnay ayaa waxaan ku arkeynay dhismayaal cusub oo kuwa ganacsiga u badan, suuqyo cusub iyo dad ...	Read More »
warka subaxnimo waxa uu kamid yahay saddexda war ee ka baxa idaacada alfurqaan,waxaana maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 19 07 2018	Read More »
Xuuthiyiinta oo diyaarad duuliye la’aan ah ku weeraray magaalada Riyaad ee xarunta maamulka Aala-Sucuud.
Malleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee ka dagaalama wadanka Yaman ayaa sii kordhinaya awoodooda dhanka meydaanka, iyagoona dhowr jeer sawaariikh ku garaacay magaalooyinka maamulka Aala-Sucuud uu ka taliyo. Xuuthiyiinta ayaa sheegtay in diyaarad duuliye la’aan ah ku weerareen mid kamid ah xarumaha lagu sifeeyo batroolka ee hoostaga shirkadda Aramaako, kuna yaala magaalada Riyaad ee caasimadda maamulka Aala-Sucuud. Diyaaradda dronta ayay sheegeen in lagu ...	Read More »
Insha allaah halkaan waxaad ka dhegeysa kartaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo caawo qodobo muhiim ah lagu soo qaatay. Dhuuxa wareysiyada 18 07 2018.	Read More »
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo qodobo kala duwan lagu qaatay. Halkaan ka dhegeyso war duhur 18 07 2018	Read More »
Xaaladda Caafimaad ee Sheykh Safar Al-Xawaali oo laga deyrinayo!
Sheekha caalimka ah ee Safar Al-xawaali oo dhawaan ay xireen ciidamada amaanka ee maamulka Aala-Sucuud ayaa laga deyrinayaa xaaladiisa caafimaad, kadib markii xanuuno ay lasoo derseen. Sheekha oo ah qof waayeel ah, islamarkaana xanuuno badan ay horay u hayeen ayaa waayay daryeelkii caafimaad ee uu heli jiray markii uu gurigiisa joogay, waxaana haddii xaaladiisa sidan lagu fiirsado suuragal ah inuu ...	Read More »
Wilaayada Sh/hoose Iyo Beesha Shan Gamaas oo Ku Heshiiyay Qodobo Muhim Ah. (Sawirro+Codad)
Talaadadii shalay, waxaa magaalada Kuunyo Barrow ee gobolka Sh/hoose lagu soo gunaanaday kulan muhim ah oo u dhaxeeyay wilaayada islaamia ah ee Sh/hoose iyo beesha Shan gamaas (Tunni) kulankaas oo sidoo kale ay qeyb ka ahayd dowro diini ah oo la siinayay odayaasha dhaqanka. Qodobada sida aadka ah loo lafa guray ayaa waxaa kamid ah: – ka hor tagga duullaanka ...	Read More »
warka subaxnimo waxa uu kamid yahay saddexda war ee ka baxa idaacada alfurqaan,waxaana maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 18 07 2018	Read More »
War-baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa u suura gashay iney wareysi gaar ah la yeelato Ugaaska guud ee Beesha Geeledle, Ugaas Raage Macallim Barre Macallim Ax’ed oo Khamiistii lasoo dhaafay lagu doortay degaanka madiinatul Khaur, ee wilaayada islaamiga Bay iyo Bakool. Ugaaska ayaa waxaan ugu horreyn kala sheekeysanay taariikh nololeedkiisa iyo inta ay gaarsiisan tahay waaya aragnimadiisa, waxaana uu sheegay ...	Read More »